१० करोड घुस वार्ता गर्ने झापाली वकिल ओली र चोलेन्द्रका विश्वासपात्र ! - Kantipath
१० करोड घुस वार्ता गर्ने झापाली वकिल ओली र चोलेन्द्रका विश्वासपात्र !
निलम्बित प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरको नाम लिएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा घुस वार्ता भएको पाइएको छ । जबराको नाम लिँदै नेपाल बार एशोशियशनका निवर्तमान कोषाध्यक्ष रुद्र प्रसाद पोखरेल र जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीच घुस वार्ता भएको हो ।
सर्वसाधरणको ७ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रीय ब्युरो सिआइबीद्वारा पक्राउ परेका तामाङ र उनका मामा ससुरा केशवलाल श्रेष्ठलाई मुद्दा चलाएको थियो । तामाङ र श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्ने विषयमा निलम्बित प्रधान्यायधीश जबरालाई समेत सेटिङ मिलाएको मा सुन्न सकिन्छ ।
पोखरेल झापा गौरादह स्थायी घर भएका कानुन व्यवसायी हुन्। उनी २०५१ सालदेखि नै वकालत गर्दै आएका छन्। उनले २०५३ सालमा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएर वकालत गर्न थालेका थिए। अहिले उनको ल फर्म आरपी पोखरेल एन्ड एसोसिएट काठमाडौंको अनामनगरमा छ।
पोखरेल चन्डेश्वर श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल बार एसोसिएसनमा २०७६ देखि २०७९ सम्म कोषाध्यक्ष थिए। एमाले पार्टीनिकट पोखरेलले वाम कानुन व्यवसायी समूहका तर्फबाट कोषाध्यक्ष जितेका थिए। पोखरेल पाटन बार एसोसिएसनमा २०७०-७३ सम्म अध्यक्ष थिए। उनी एमाले कानुन विभागका सदस्य पनि हुन्।
पोखरेलको घर भएको गौरादह एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ। त्यसैले पनि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग उनको राम्रो सम्बन्ध छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले संसद विघटन गरेपछि पोखरेलले त्यसका पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका थिए।
पोखरेलको सर्वोच्चका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग पनि नजिकको सम्बन्ध छ। नेपाल बार एसोसिएसनले राणालाई हटाउन आन्दोलन गरिरहेका बेला पोखरेल उनको समर्थनमा उत्रिएका थिए। नेपाल बारले आन्दोलन थालेपछि र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गरेपछि त्यसलाई चुनौती दिँदै पोखरेल मुद्दा लिएर अदालतमा बहस गर्न गएका थिए।
उनले नेपाल बारले गरेको आन्दोलन बेठिक भएको भन्दै राणाको राजीनामा मागेर आन्दोलन गर्न नहुने तर्क गरेका थिए। राणासँग निकटको सम्बन्ध बनाएका पोखरेलले अदालतमा न्यायाधीश र मुद्दाका पक्षबीच बिचौलियाको काम गरेर सेटिङमा मुद्दा फैसला गराउने गरेको कतिपय वकिलहरूको आरोप छ।